Naung Naung Lwin, Author at Lifestyle Myanmar - Page 25 of 40
Selfie ပံုလွလွေလးေတြရေအာင္ ဘယ္လိုဖန္တီးၾကမလဲ???
ခ်စ္တို႔ေရ… ခ်စ္တို႔ေန႔စဥ္သံုးေနတဲ့ Social Media ေတြမွာ selfie ပံုလွလွေလးေတြ တစ္ေန႔ကို ဘယ္ေလာက္ေတာင္ျမင္ေနရလဲ။ အဲ့ဒီလို selfie လွလွေလးေတြကို ခ်စ္တို႔ကိုယ္တိုင္ေကာ မရိုက္ၾကည့္ခ်င္ၾကဘူးလား။ ပီးျပည့္စံုတဲ႔ selfie လွလွေလးရဖို႔ ဆိုရင္ “ေလ့က်င့္ျခင္းသည္သာ အာင္ျမင္ရာ၏”...
ကလေးရဲ့ fine motor skill (လက်ချောင်းကြွက်သားငယ်လေးတွေ လှုပ်ရှားမှု)က အသက် ၁၈လကနေ ၃နှစ်အထိ သိသာသာသာ စတင်ဖွံ့ဖြိုးပါတယ်။ သူတို့ရဲ့လက်တွေနဲ့ အရာဝတ္တုသေးသေးလေးတွေကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး ကျွမ်းကျင်စွာကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းက အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဖွံ့ဖြိုးလာတာပါ။ စာရေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကတော့ fine motor...
အခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့ လစာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အသေးစိတ်စပ်စုမေးမြန်းခြင်းဟာ မယဉ်ကျေးတဲ့အပြုအမူဖြစ်ကြောင်း ယေဘုအားဖြင့် အားလုံးသဘောတူကြပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လု့ိ သင်ကိုယ်တိုင်ယခုလိုမကြာခဏ မေးမြန်းခြင်းခံရရင်လည်း မနှစ်သက်မှုကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ လစာအကြောင်းမဟုတ်ပဲ ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့ စကားတခွန်းက အခြားသူတစ်ယောက်ကို အဆင်မပြေမှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်တာကိုတော့ မေ့လျော့နေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်အောင်...
ထာဝရ FA ဖြစ်ဖို့ ဇာတာပါလာတဲ့ လူ ၁၀ မျို
တချို့သူတွေဟာ ရုပ်ရည်နဲ့အရည်အချင်းမှာ ပြောစရာမရှိသော်လည်း relationship တစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့အတွက်တော့ ဘယ်လိုမှစွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း မရှိကြပါဘူး။ တကယ်လို့ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ကိုရခဲ့ရင်တောင်မှ ဘယ်လောက်မှမကြာခင် ထုံးစံအတိုင်း FA ပြန်ဖြစ်သွားတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ FA(forever alone) နဲ့ Single...
မိခင်နို့တိုက်နေဆဲကာလမှာ ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အစားအစာ ၆ မျိုး
ကလေးအသက် ၆လအထိ မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်းနဲ့ လုံလောက်တာကို မိခင်တိုင်းသိရှိကြပေမယ့် နို့တိုက်နေဆဲကာလမှာ မိခင်နို့ရဲ့အရည်အသွေးကို ကောင်းမွန်စေဖို့အတွက် ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အစားအစာတွေအကြောင်းကိုလည်း သိရှိထားဖို့ လိုပါတယ်။ မိခင်ဖြစ်သူစားတဲ့ အရာမှန်သမျှဟာ ကလေးဆီကိုနို့ရည်မှတဆင့် ရောက်ရှိစေတာကြောင့် စားသောက်မှုပုံစံကို အထူးဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ ပဲများ...
သူကိုယ်တိုင်ဘွဲ့မရပေမယ့် ချစ်သူကို ကောလိပ်ပို့ပေးနိုင်ဖို့အတွက် အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာပြီး အလုပ်ကြိုးစားခဲ့တဲ့သူ
အချစ်စစ်အချစ်မှန်နဲ့ ချစ်သူတွေဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဖြည့်ဆည်းပေးတတ်ကြပြီး ချစ်သူအတွက်ဆို ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတောင် စွန့်လွှတ်ဖို့ ဝန်မလေးတတ်ကြပါဘူး။ တကယ့်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ Ador Adrian ဆိုသူဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ ချစ်သူရဲ့ပညာရေးကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့အတွက် အနစ်နာခံမှုတွေ အလုပ်ကြိုးစားမှုတွေနဲ့ အချစ်စစ်အကြောင်းကို သက်သေပြခဲ့တဲ့အတွက် ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာ ဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။...
တူ၊ တူမလေးတို့ရဲ့ ကောင်းမွန်စွာကြီးပြင်းမှုအတွက် အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ တီလေးတို့အကြောင်း
ကလေးတွေရဲ့ ကောင်းမွန်စွာကြီးပြင်းလာမှုနဲ့ ဘဝပျော်ရွင်မှုအတွက် မိဘတွေရဲ့အုပ်ထိန်းမှုက အရေးကြီးသလိုပဲ တီလေးတို့ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကလည်း တမူထူးခြားတဲ့ နေရာကနေပါဝင်နေပါတယ်။ တချို့အန်တီတွေဆိုရင် တူ၊ တူမလေးတို့အတွက် အဒေါ်နေရာသာမက၊ ဒုတိယအမေ၊ ဆရာမ၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လို တာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်ပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အန်တီတွေရဲ့...
စစ်တမ်းတွေအရ မောင်နှမထဲမှာ အငယ်ဆုံးကလေးရဲ့ ထူးခြားချက်လေးများ
စစ်တမ်းတွေရဲ့ ဖော်ပြချက်တွေအရ မိသားစုထဲမှာ အငယ်ဆုံးကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့အကို၊အမတွေထက် ထူးခြားချက်လေးတွေ ရှိနေပြီး သူတို့ရဲ့ဟာသဉာဏ်၊ တာဝန်ယူမှု နှင့် အခြားစရိုက်များကို အကြီးတွေနဲ့ နိုင်းယှဉ်ပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ မောင်နှမထဲမှ အငယ်ဆုံးကလေးတွေဟာ မိသားစုအတွင်းမှာ ရယ်စရာအကောင်းဆုံး သူတွေဖြစ်ကြပြီး အငယ်ဆုံးကလေး ၄၆...
Relationship အတွက်နဲ့ မစတေးသင့်တဲ့ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး (၁၀) ချက်
Relationship တစ်ခုဟာ အပြန်အလှန်ကြင်နာမှုတွေနဲ့ ပျော်ရွင်စရာကောင်းချင်ကောင်းနေပါလိမ့်မယ်၊ သို့မဟုတ် တစ်ယောက်က အရမ်းကိုမွန်းကျပ်ပြီး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ ကြုံချင်ကြုံနေပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လို relationship တိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်ရွင်စရာကောင်းပြီး ကောင်းမွန်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ထောက်ပံ့ပေးမှု၊ အားပေးမှု၊ စာနာမှု နဲ့ ပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်...
မိဘတိုင္းက ကိုယ့္ရဲ႕သားသမီးကို အျခားကေလးထက္ ပိုၿပီးထူးခြၽန္ေစခ်င္တာ သဘာဝပါပဲ။ အျခားသူေတြထက္ ပိုၿပီးေတာ္ခ်င္တာေၾကာင့္ အမွတ္တမဲ့ပဲ "သူ႔ကိုၾကည့္ပါဦး နင့္ထက္အမ်ားႀကီး လိမၼာတယ္၊ နင္သူ႔ကိုအတုယူသင့္တယ္၊ သူမ်ားသားသမီးေတြမ်ား ေတာ္လိုက္တာ" စသျဖင့္ အမႈမထားပဲ ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကေလးေတြဆိုတာ ႏူးညံ့တဲ့စိတ္ခံစားခ်က္ရွိၾကၿပီး...
Page 25 of 40 Prev 1 … 24 25 26 … 40 Next
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kopaing/public_html/wp-content/themes/jnews/lib/theme-helper.php on line 3537